कृषि र औंद्योगिक क्रान्ति गर्ने सोच बोकेका धर्तीपुत्र सुबोधकुमार गुप्ता – Nepal's No. 1 Digital Newspaper
०६ मंसीर, काठमाडौँ । सुबोध कुमार गुप्ता एक सफल उद्योगपति एवम् व्यवसायी हुन । उनको जन्म सन १९७४ मा औंद्योगिक नगरी विरगंज स्थित रानीघाटमा भएको थियो ।
पिता सुकदेव र माता कान्तिदेवी गुप्ताका सुपत्रका रुपमा उनले यस धर्तीमा पाइला हालेका हुन । गुप्ताले आफ्नो शिक्षारम्भ विरगंज स्थित रेलवे माध्यमिक विद्यालयबाट गरेका थिए । २ कक्षासम्म सो विद्यालयमा अध्ययन गरे पस्चात उनले ३ देखी ७ कक्षासम्म विरगंजकै त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गरे । अध्ययन प्रति बिशेष रुची राख्ने गुप्ताले भारतबाट म्याथ बिषयमा बिएस्सी गरेका छन् । उनमा नेपाली अंग्रेजी र हिन्दी भाषाको राम्रो ज्ञान छ ।
क्रिकेट र फुटबल खेलका अलवा संगित सुन्ने र पढने आदत उनमा छ । उनी विश्वका करिब ४० देश पुगिसकेका छन् । ९० को दशकमा व्यवसायको क्षेत्रमा पाईला हाल्दै उम्दा व्यवसायीको रुपमा परिचय बनाउने सफल सुबोध कुमार गुप्ता पारिवारिक दायित्वलाई पनि उत्तिकै महत्व दिने गर्छन् । परिवारको साथ विना सफलता हासिल गर्ने मानिसहरुलाई हम्मेहम्मे पर्ने उनी बताउँछन् । ४६ बर्ष टेकेका गुप्ता यो अवस्थासम्म आईपुग्दा आफ्ना पिता मातासँगै श्रीमती रानी, छोरा मोहित अनि साहिल, छोरी मोहिनी र साथीभाइ एवम इस्टमित्रको दर्विलो साथ र स्नेह आफुसँग रहेको स्मरण गर्छन् । सामाजिक चेतका धनी तथा शिक्षाप्रेमी सुबोध कुमार गुप्ता विभिन्न सामाजिक संघ संस्था एवम् शैक्षिक प्रतिस्ठानहरुमा समेत आवद्ध छन् ।
कृषि एवम् औद्योगिक क्रान्तिबाट नै देशले समृद्धी हासिल गर्न सक्छ भन्ने सोच र भावनाबाट ओतप्रोत गुप्ताले देशको मुहार फेर्न सक्ने उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरिरहेका मात्र छैनन् कि यसका अलवा पनि निजी क्षेत्रको तर्फबाट सो क्षेत्रको नेतृत्व समेत गरिरहेका छन् । गुप्ता हाल चामल, दाल, तेल उत्पादक संघका केन्द्रिय अध्यक्ष समेत हुन ।
उक्त संघको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा गुप्ताले नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने दुरगामी सोच बोकेर अघि बढेका छन् । संगठन सुदृढिकरणको कार्य होस् वा राज्य स्तरमा निजी क्षेत्रको आवाजलाई बुलन्द पार्ने कार्य यस मामिलामा गुप्ताको कार्यकाल निकै सफल मानिन्छ । खाद्य उद्योगको क्षेत्रको विकास र उन्नयनमा निकै सकृयतापुर्वक लागि पर्दै आएका गुप्तालाई व्यवसायिक ब्रित्तमा भिजन भएका नेताको रुपमा लिईन्छ । युवा व्यवसायीहरु माझ निकै चर्चित गुप्तामा नयाँ पुस्ताका लागि रोल मोडल बन्न सक्ने ल्याकत देखिन्छ ।
मन, वचन र कर्मले आफ्नो दायित्वमा खरो उत्रदै आएका गुप्ता आम व्यवसायी माझ बौद्धिक व्यक्तित्वका रुपमा पनि परिचित छन् । समय समयमा उनले खाद्य, कृषि र व्यवसाय क्षेत्रसँग सम्बन्धित रही कलम चलाउदै आएको पाईन्छ । उनका लेख रचनाहरु राष्ट्रिय एवम् स्थानिय स्तरका संचार माध्यममा प्रकाशित हुँदै आएका छन् । व्यवसायिक रुपमा उद्योग र व्यापारको क्षेत्रमा लाग्दै गर्दा लेख मार्फत विचार सम्प्रेषणले सो क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने उनको विश्वास छ । तसर्थ पनि अनवरत रुपमा उनी लेखन कार्यमा जुटदै आएका छन् ।
निजी क्षेत्रको भनाई राख्दै लेखिने यस्ता समसामयिक लेखले सरकारलाई निती एवम् योजना बनाउन, उपभोक्तालाई बजार अवस्था बारे जानकारी दिलाउन र आम व्यवसायीलाई हौसला प्रदान गर्न सघाउ पुग्ने उनको बुझाई छ । व्यवसायिक वातावरणमा आँच आयो भने देशको अर्थतन्त्र र जनजीवनमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने हुँदा यस तर्फ राज्य र सरोकारवाला सबैले ध्यान पुर्याउन जरुरी रहेको उनको भनाई छ ।
नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले यस वर्षको राष्ट्रिय कविता महोत्सव मङ्सिर २९ मा हुने
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दाेलनका नायक क. प्रचण्डले अति सहे तर अत्याचार सहेनन
बालमनाेबिज्ञान, माअेाबादि युद्ध र रुकुम राेल्पा